Xeer lagu dalbanayay in kuraasta haweenka ay u tartamaan haween keliya oo la meel mariyey… – Hagaag.com
Xeer lagu dalbanayay in kuraasta haweenka ay u tartamaan haween keliya oo la meel mariyey…
Posted on 21 Juunyo 2020 by Admin in National // 0 Comments
Xildhibaanasa Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xaruntooda KMG ayaa meel mariyay mooshin loo gudbiyay Gudoonka Baarlamaanka oo lagu dalbanayay in kuraasta dumarka kaliya u tartamaan Dumar.
Xildhibaanada ayaana shalay iyo maanta dooda kulan ka yeeshay Xeerkan qoondada dumarka, waxaana ugu dambeyn Xildhibaanada cod u qaadeen meel marinta ama diidmada xeerkan ay soo gudbiyeen Guddiga wadajirka ee dhameystirka Xeerarka doorashooyinka.
Gudoomiyaha golaha Shacabka ayaa cod galiyay xeerka qoondada haweenka gaar ahaan in kuraasta Dumarka aysan rag kula tartamin, waxaana xeerkan u codeeyay in la meel mariyo 134-Xildhibaan , waxaa sidoo kale xeerkan meel marintiisa diiday 7-Xildhibaan.
Maxamed Mursan Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka Shir gudoominayay ayaa ansixinta kadib sheegay in xeerkan ay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ee dhameystirka Xeerarka doorashooyinka uu yahay ansax.
Xeerkan ayaana ahaa mid dood badan ka dhax abuuray xildhibaanada sidoo kale kasoo horjeesteen Siyaasiyiin badan, waxa uuna xeerkan yahay mid dan badan ugu jira haweenka maadaama kuraastooda aysan rag kula tartami doonin.